Angazi ngawe, kepha sengiqala ukubona izikhangiso eziningi kakhulu ku-Youtube. Njengoba ividiyo iba ngexabiso eliphansi futhi inomthelela, kubonakala sengathi wonke amasu wokumaketha adinga ukuyifaka. Ividiyo ihluke kakhulu ngoba ifinyelela cishe wonke umuntu. Akuwona wonke umuntu ofundayo, kepha wonke umuntu uyabuka. Futhi nge-Youtube efakwe cishe kuwo wonke amapulatifomu axhunyiwe, ayikho indlela ongawabuki ngayo amavidiyo we-Youtube. Kubakhangisi, umthelela wezikhangiso kumavidiyo afanele